प्रधानमन्त्रीलाई बाबुराम भट्टराईको जवाफ : हामीलाई जीवन र स्वतन्त्रता दुवै चाहिन्छ
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भिडियो सन्देशमार्फत कडा जवाफ फर्काएका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यतिखेर जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्ता प्रश्नमा अलमलिन नहुने बताएका थिए ।
सोही भनाइप्रति लक्षित गर्दै बिहीबार भिडिओ सन्देशमार्फत समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले जीवन र स्वतन्त्रता दुवै चाहिने बताएका हुन् ।
कोरोनापछि पनि देशलाई समृद्ध बनाउने, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका योजनामा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक क्षेत्रमा अब कसरी जाने भन्ने विषयमा राज्यले विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अन्ततः मानव जातिले कोरोनालाई परास्त गर्छ र मानव सभ्यता अगाडि बढ्छ । सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ । सकरात्मक सोच राखौँ ।’
६ मिनेट लामो भिडियोमा भट्टराईले कोरोनासँग जुध्न अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
राज्य र नागरिकको सहकार्यले मात्रै कोरोना परास्त गर्न सकिने भन्दै उनले तनावमुक्त भएर सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरेका छन् ।
- अप्ठेरोमा परेका श्रमिक, किसानको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आग्रह ।
- जीवन र स्वतन्त्रता दुबै प्यारो हुन्छ । यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ ।
आउनुहोस् । सबै मिलेर यस महाव्याधीविरुद्ध यथा स्थानबाट लडौँ ।थप भिडियो सन्देशमा धन्यबाद !https://t.co/7w4i6qecp2
— नियमित हात धोऔं / Wash your hands ! (@brb1954) April 9, 2020
प्रकाशित मिति : चैत २७, २०७६ बिहीबार १४:३२:१९,